Fanamboarana milina famenoana masomboly - milina famenoana masomboly any Sina Manufacturers sy mpamatsy
5BY-5A milina fanosotra voa / milina fanodinana voa ho an'ny vary orza varimbazaha
Ny milina fanosotra voa 5BY-5A dia ampiasaina indrindra amin'ny fanodinana voa. Izy io dia manana fampiharana malalaka amin'ny famenoana ny voan'ny vokatra isan-karazany, toy ny voan'ny varimbazaha, vary orza, katsaka, ampemby, soja, landihazo, anana, voankazo sy ny sisa. Horakofana fanafody ranon-javatra ny masomboly alohan'ny famafazana, mba hiadiana amin'ny aretina isan-karazany ary ho tsara kokoa ny fitsimohany.
5BY-5B milina fanosotra voa / milina fanodinana voa ho an'ny vary orza
Ny milina fanosotra voa 5BY-5B dia ampiasaina indrindra amin'ny fanodinana voa. Izy io dia manana fampiharana malalaka amin'ny masomboly isan-karazany, toy ny varimbazaha, vary orza, katsaka, ampemby, soja, landihazo, anana, voankazo sy ny sisa.
5BY-10B Seed coating Machine / milina fikarakarana voa ho an'ny tsaramaso vary orza
Ny milina fanosotra voa 5BY-10B dia ampiasaina indrindra amin'ny fanodinana voa. Izy io dia manana fampiharana malalaka amin'ny famenoana ny voan'ny vokatra isan-karazany, toy ny voan'ny varimbazaha, vary orza, katsaka, ampemby, soja, landihazo, voan-javamaniry, voa voankazo sy ny sisa.
Ny masomboly sy ny masomboly fanosotra voa dia mifangaro amin'ny fomba mitovy amin'ny tahan'ny voatondro ary manangana horonan-tsarimihetsika eo amin'ny voa. Manatsara voa ` aretina fisorohana sy ny insecticidal vokany aorian`ny famafazana. Ny milina fanasan-tsakafo karazana batch dia modely manan-danja amin'ny fanodinana sy famokarana voa.